ယူနိုက်တက်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ဂျေ ၀င်နေကြတယ်လို့ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် – Sport Gaber
November 9, 2020 November 9, 2020 - by Sports Gaber - LeaveaComment
မန်ယူအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဂွိုင်းယားက ကလပ်အပေါ်မကြာခဏပြုလုပ်နေကြတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေဟာမနာလိုစိတ်ကို အခြေခံပြီးထွက် ပေါ်လာတာလို့ ပြောလိုက်ပါတယ် မန်ယူဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အာဆင်နယ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်မှာအစ္စတန်ဘူလ်တို့ကိုနှစ်ပွဲ ဆက်တိုင်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် ဝေဖန်မှုတွေကို အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းအပေါ်ဝေဖန်ပုတ်ခတ်သူတွေက်ို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ??????? ဒီအသင်းကို ကျွန်တော်ရောက်ကတည်းက သတိပြုမိတဲ့တစ်ခုတည်းသောအချက်က တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကလပ်အသင်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့အသင်းအကြောင်းပဲလို အများဆုံးပြောနေကြတာကို သတိထားမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အသင်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးဆုံးကလပ်အသင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲ လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတာကို မလိုချင်ကြပါဘူးဘာ့ကြောင့်သူတို့ဒီလိုဖြစ်နေကြလဲဆို တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်က အောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ပါပဲ’
လက်ရှိ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နည်းပြ ပြောင်းအလဲက ကြိုးတန်းပေါ်မှာဖြစ်နေတယ် ၊ဆိုးလ်ရှားဟာ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကို အပြည့်အဝရနေဆဲဖြစ်ပါတယ် အသင်းရဲ့ဂန္တဝင်ကစားသမားတွေထဲမှာတောင် ဆိုးလ်ရှားကို ထောက်ခံတဲ့ ကစားသမားကပိုများနေတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ဆိုးလ်ရှားကို အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေ ၊ Hard Core ဖန်တွေက အချိန်ထပ်မပေးစေချင်တော့ဘူး အဲဗာတန်ကိုအဝေးကွင်းမှာ ၃-၁ နဲ့နိုင်လိုက်တဲ့အတွက် ဖိအားတွေလျော့ပါးသွားသလို ၁၉၈၉-၉၀ နောက်ပိုင်းအဆိုးရွားဆုံးရာသီအစ ဖြစ်မယ့်အရေးကနေလည်း ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့ပါတယ် မန်ယူဟာ အဲဗာတန်ကို အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ၇ ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ ၃ ပွဲသာအနိုင်ရပြီး အဆင့် ၁၄ မှာဘဲရှိနေသေးသလို ဒီရာသီအိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲလည်း မရှိသေးတဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေကို ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတာပါ။
မက်ဂွိုင်းယား” တစ်ခါတလေမှာဝေဖန်မှုတွေကို လစ်လျူရှူဖို့ ခက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာ တစ်နှစ်ခွဲရှိတဲ့ကာလ အတွင်းမှာ သတိထားမိတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ မန်ယူဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာလူပြောအများဆုံးအသင်းဖြစ်နေတာပါဘဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မန်ယူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအခမ်းနားဆုံးအသင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတာကို လူတွေကမမြင်ချင်ကြလို့ပါ ဝေဖန်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး ခြေစမ်းပြလိုက်တာဟာ သူတို့ရဲ့ဝေဖန်သံတွေကို အကောင်းဆုံး ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာပါပဲ အဆိုးမြင်မှုတွေကို လေ့ကျင့်ရေးကွင်းအထိအရောက်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူး တစ်ခါတလေတော့လည်း ခက်ခဲမှာပေါ့ဗျာ” လို့ပြောသွားပါတယ်။
မက်ဂွိုင်းယား ကိုယ်တိုင်လည်း ၂၀၁၉ တုန်းကလက်စတာကနေ နောက်ခံလူတွေထဲမှာ
ပြောင်းရွှေ့ကြေးအမြင့်ဆုံးနဲ့ ရောက်ရှိလာပြီး နောက် ဝေဖန်သူတွေရဲ့ပစ်မှတ်ထားခြင်းကို မကြာခဏခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
မနျယူအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဂှိုငျးယားက ကလပျအပေါျမကွာခဏပွုလုပျနကွေတဲ့ ဝဖေနျမှုတှဟောမနာလိုစိတျကို အခွခေံပွီးထှကျ ပေါျလာတာလို့ ပွောလိုကျပါတယျ မနျယူဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အာဆငျနယျ၊ ခနြျပီယံလိဂျမှာအစ်စတနျဘူလျတို့ကိုနှဈပှဲ ဆကျတိုငျရှုံးနိမ့ျပွီးနောကျ ဝဖေနျမှုတှကေို အပွငျးအထနျခံခဲ့ရပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးအပေါျဝဖေနျပုတျခတျသူတှကျေို တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ ??????? ဒီအသငျးကို ကြှနျတောျရောကျကတညျးက သတိပွုမိတဲ့တဈခုတညျးသောအခကြျက တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကလပျအသငျးတှထေဲမှာ ကြှနျတောျတို့အသငျးအကွောငျးပဲလို အမြားဆုံးပွောနကွေတာကို သတိထားမိတယျဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကြှနျတောျတို့အသငျးက တဈကမ်ဘာလုံးမှာ အကွီးဆုံးကလပျအသငျးကွီးဖွဈနလေို့ပါပဲ လူတှကေ ကြှနျတောျတို့ကောငျးနတောကို မလိုခငြျကွပါဘူးဘာ့ကွောငျ့သူတို့ဒီလိုဖွဈနကွေလဲဆို တော့ကြှနျတောျတို့ရဲ့အတိတျက အောငျမွငျမှုတှကွေောငျ့ပါပဲ’
လကျရှိ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ နညျးပွ ပွောငျးအလဲက ကွိုးတနျးပေါျမှာဖွဈနတေယျ ၊ဆိုးလျရှားဟာ ဘုတျအဖှဲ့ရဲ့ထောကျခံမှုကို အပွည့ျအဝရနဆေဲဖွဈပါတယျ အသငျးရဲ့ဂန်တဝငျကစားသမားတှထေဲမှာတောငျ ဆိုးလျရှားကို ထောကျခံတဲ့ ကစားသမားကပိုမြားနတေယျ ၊ ဒါပမေဲ့ ဆိုးလျရှားကို အသငျးရဲ့ပရိသတျတှေ ၊ Hard Core ဖနျတှကေ အခြိနျထပျမပေးစခေငြျတော့ဘူး အဲဗာတနျကိုအဝေးကှငျးမှာ ၃-၁ နဲ့နိုငျလိုကျတဲ့အတှကျ ဖိအားတှလြေော့ပါးသှားသလို ၁၉၈၉-၉၀ နောကျပိုငျးအဆိုးရှားဆုံးရာသီအစ ဖွဈမယ့ျအရေးကနလေညျး ရှောငျလှှဲနိုငျခဲ့ပါတယျ မနျယူဟာ အဲဗာတနျကို အနိုငျရခဲ့ပမေယ့ျ ၇ ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ ၃ ပှဲသာအနိုငျရပွီး အဆင့ျ ၁၄ မှာဘဲရှိနသေေးသလို ဒီရာသီအိမျကှငျးနိုငျပှဲလညျး မရှိသေးတဲ့အတှကျဝဖေနျမှုတှကေို ဆကျပွီးရငျဆိုငျရဖို့ရှိနတောပါ။
မကျဂှိုငျးယား” တဈခါတလမှောဝဖေနျမှုတှကေို လဈလြူရှူဖို့ ခကျပါတယျ ဒါပမေယ့ျ ဒီကိုကြှနျတောျရောကျခဲ့တာ တဈနှဈခှဲရှိတဲ့ကာလ အတှငျးမှာ သတိထားမိတာတဈခုတော့ရှိပါတယျဒါကတော့ မနျယူဆိုတာကမ်ဘာပေါျမှာလူပွောအမြားဆုံးအသငျးဖွဈနတောပါဘဲ ဘာကွောင့ျလဲဆိုတော့ မနျယူဟာကမ်ဘာပေါျမှာအခမျးနားဆုံးအသငျးဖွဈပွီးကြှနျတောျတို့စှမျးဆောငျရညျကောငျးတာကို လူတှကေမမွငျခငြျကွလို့ပါ ဝဖေနျမှုတှကေို ရငျဆိုငျပွီး ခွစေမျးပွလိုကျတာဟာ သူတို့ရဲ့ဝဖေနျသံတှကေို အကောငျးဆုံး ပွနျတုံ့ပွနျလိုကျတာပါပဲ အဆိုးမွငျမှုတှကေို လေ့ကငြ့ျရေးကှငျးအထိအရောကျခံလို့မဖွဈပါဘူး တဈခါတလတေော့လညျး ခကျခဲမှာပေါ့ဗြာ” လို့ပွောသှားပါတယျ။
မကျဂှိုငျးယား ကိုယျတိုငျလညျး ၂၀၁၉ တုနျးကလကျစတာကနေ နောကျခံလူတှထေဲမှာ
ပွောငျးရှှေ့ကွေးအမွင့ျဆုံးနဲ့ ရောကျရှိလာပွီး နောကျ ဝဖေနျသူတှရေဲ့ပဈမှတျထားခွငျးကို မကွာခဏခံခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။
Previous Article ယူနိုက်တက်က အလွတ်ပြောင်းရွေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ခွာမယ့် ဝါရင့်ဂိုးသမား
Next Article အင်္ဂလန်အသင်းကစားသမားလူစာရင်းမှာ ယူနိုက်တတ်မှ ဘစ်ဆာကာ ဂရင်းဝုဒ် မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပေါ် ဆောက်ဂိတ် ပြောကြား